Indlela ehlakaniphile yokwenza i-imeyili ukwenza kube ngokwakho kuchaziwe | Martech Zone
Indlela ehlakaniphile yokwenza i-imeyili ukwenza kube ngokwakho kuyachazwa
NgoLwesithathu, Januwari 16, 2019 NgoMgqibelo, Januwari 19, 2019 UDenis Zhinko
Abathengisi bavame ukubona ukwenza ngezifiso i-imeyili njengenkomba ekusebenzeni okuphezulu kwemikhankaso ye-imeyili futhi bayisebenzise kakhulu. Kepha sikholelwa ukuthi indlela ehlakaniphile yokwenza ngezifiso i-imeyili inika imiphumela engcono ngokubuka kokubiza izindleko. Sihlose ukuthi indatshana yethu ivuleke kusuka kokuthumela i-imeyili ngobuningi obudala kuya ekwenzeni ngezifiso i-imeyili ukuze kuboniswe ukuthi amasu ahlukahlukene asebenza kanjani ngokuya ngohlobo lwe-imeyili nenjongo. Sizonikeza ithiyori yendlela esisebenza ngayo bese sengeza ingcosana yokuzijwayeza ukuchaza ukuthi imibono yethu ingasetshenziswa kanjani kumathuluzi wokuthengisa adumile.
Uzoya nini ngobuningi
Kunemiyalezo ehloselwe lonke ikhasimende, futhi indlela esayizi-size eyodwa iyabasebenzela. Lawa ngama-imeyili aqukethe okunikezwayo komkhiqizo kanye nokuphromotha okukodwa noma okugxilwe engxenyeni ethile. Isibonelo, abathengisi ababeki engcupheni ukusebenza kwemizamo yabo ukuthumela ama-imeyili amaningi akhuthaza imikhankaso yeholide (isb., Ukumemezela ngaphambi komkhankaso we-Black Friday) noma imilayezo yolwazi kuphela (isb. Ukwazisa ngemisebenzi yesondlo ehleliwe kuwebhusayithi).
Ngokuthumela i-imeyili ngobuningi, abathengisi abadingi ukuhlolisisa izithameli zabo futhi bacabangele izindlela zokuhlukaniswa - inhloso yabo ukudlulisa imininingwane ethile efanele wonke amakhasimende. Bonga kakhulu isikhathi ngokwakha i-imeyili eyodwa yalokho. Ukuqhubeka nesibonelo somkhankaso weBlack Friday, abathengisi bangawuqala nge-imeyili yokuqala eyinqwaba echaza imininingwane esephoyinti (isib. Izikhathi ezibekiwe).
Ungayisebenzisa kanjani. Izinyathelo ezibalulekile zokuthumela i-imeyili ngobuningi ziyefana namathuluzi amaningi wokuthengisa we-imeyili. Masizithathe kwi-MailChimp:
Ukungeza umugqa wesihloko. Kanye nomthetho ovunyelwene kakhulu wokwenza isihloko sithandeke, esimweni sesimemezelo seBlack Friday, abathengisi bangacacisa usuku lomkhankaso ozoqala lapho. Noma ababhalisile bengayivuli i-imeyili, maningi amathuba okuthi babone usuku lapho behlola ibhokisi labo le-imeyili.
Ukuklama i-imeyili. Ngaphezu kokudala okuqukethwe kwe-imeyili uqobo, lesi sinyathelo sifaka phakathi ithuba lokuhlola kuqala i-imeyili ngosayizi abahlukahlukene besikrini bese usihlola.
Uwenza Nini Ngendlela Eyakho Ama-imeyili
Siqala ukubheka emandleni wesoftware yokumaketha ukusebenzisa imininingwane yamakhasimende futhi sikhombe umkhankaso we-imeyili kobhalisile othize. Ngokwazi ukwenza ngezifiso i-imeyili kuyehluka kuye ngobuciko, sizohlukanisa ukwenza ngezifiso okuyisisekeloukuthi abathengisi bangakwazi ukuphatha ngokwabo futhi ukwenza ngezifiso okuthuthukilelapho bangadinga khona usizo lochwepheshe (uzobona ukuthi ulwazi lolimi lokubhala ludingeka kanjani ku-Salesforce Marketing Cloud yokwenza ngezifiso okuqukethwe). Eqinisweni, abathengisi bangahlanganyela womabili amazinga ngemiphumela ebonakalayo.
Izinga eliyisisekelo lomuntu siqu
Ezingeni eliyisisekelo, ukwenza ngezifiso i-imeyili kugxila kakhulu ekuthuthukiseni amanani avulekile. Ifanelana nezinhlobo eziningi zemiyalezo lapho uhlose ukukhuluma ngqo nekhasimende njengama-imeyili amukelekile, izinhlolovo, izincwadi zezindaba.
Sinikeza abathengisi ukuthi basebenzise isethi yamasu asebenziseka kalula ukwenza ama-imeyili abe ngokwezifiso.
Ukunikeza igama leklayenti kulayini wezihloko kwenza i-imeyili ivelele kunqwaba yabanye ebhokisini lokungenayo futhi ithembise ukuthi khulisa amanani avulekile ama-imeyili ngama-22%.
Ngokufanayo, ukubiza ikhasimende ngegama emzimbeni we-imeyili yilokho okwenza i-imeyili izwakale ibe ngeyomuntu uqobo futhi kwakha ukuthembela kwamakhasimende.
Ukushintsha igama lenkampani esigabeni Esisuka ekhasini eliya egameni elithile kunganikeza ukwanda okufika kuma-35% ngamanani avulekile. Icala lokusebenzisa elingenzeka lale nqubo ukuthumela ama-imeyili kumakhasimende avela kozomaketha osebenza nabo njengamanje.
Umsebenzi wokwenza umugqa wendaba ube ngowakho, isigaba Esisuka kanye nomzimba we-imeyili kungathatha isikhathi esiningi nomsebenzi wezandla uma kungenziwanga nge-software yesimanje yokuthengisa nge-imeyili.
Ungayisebenzisa kanjani. Sikhethe ukukhombisa izindlela ezichazwe ngokwezifiso ezisetshenzisiwe ku-Microsoft Dynamics for Marketing, uhlelo lokusebenza lokuzenzakalela lokumaketha oluhlanganisa ukumaketha kwe-imeyili nakho. Lapho kuklanywa i-imeyili, abathengisi bangeza okuqukethwe okunamandla okuxhuma kumarekhodi wamakhasimende. Ngalokho, basebenzisa inkinobho yokuSiza yokuHlela “ ”Iyatholakala kubha yamathuluzi wokufomatha umbhalo lapho kukhethwa into yombhalo kumklami wokuqhafaza. Uhlelo luzoshintsha ngokuzenzakalela okuqukethwe okunamandla ngokuhambisana nolwazi oluvela kwirekhodi lamakhasimende uma i-imeyili ithunyelwe.
Izinga eliphakeme lokwenza ngezifiso
Ezingeni eliphakeme, ukwenza ngezifiso i-imeyili kuba okushintsha umdlalo njengoba sikhuluma manje ngokwenza okuqukethwe kwe-imeyili kube yizingxenye zamakhasimende noma nomamukeli ngamunye. Lokhu kubiza ukufaka idatha enkulu yamakhasimende ezenzweni - abathengisi bangahle badinge imininingwane yomuntu (iminyaka, ubulili, indawo yokuhlala, njll.), Umlando wokuthenga, ukuthenga okuthandayo, kanye nezinhlu zokufisa ukudala ama-imeyili abaluleke kakhulu kumakhasimende.
Lapho abathengisi behlanganisa umlando wokuthenga nokuphequlula kwamakhasimende ekumaketheni kwabo kwe-imeyili, bahlala behambisana nezintshisekelo zekhasimende ngokuqukethwe okubhekiswe ngakunye. Njengoba bekhuluma ulimi olufanayo namakhasimende, bona upsellngempumelelo enkulu. Isibonelo, abathengisi bangathumela ukukhethwa kwezingubo zakusihlwa nezesekeli kwikhasimende elizifunile muva nje kodwa elingazithenganga.
Abakhangisi bathola amazinga aphezulu wokuchofoza ama-imeyili amemezela ukufika okusha noma imikhankaso yokuthengisa lapho benza ingxenye yamakhasimende nombukiso izincomo zomkhiqizo ezifanelekumakhasimende. Isibonelo, bangenza ngezifiso umkhankaso we-imeyili wokuthengisa wasehlobo wamasegimenti ezethameli zabesifazane nabesilisa.
Ungayisebenzisa kanjani. Uma abathengisi bebeka ukumaketha kwabo nge-imeyili ku-Salesforce Marketing Cloud, bazokwazi ukufinyelela ku- ukwenza ngezifiso i-imeyili okuthuthukile. Sibaphakamisa ukuthi bacabange ngecebo lokumaketha le-imeyili futhi bahlanganyele nabonisi beSalesforce ukuze balisebenzise. Kunezinyathelo ezimbili okufanele uzithathe:
Dala Izandiso Zedatha lapho idatha yamakhasimende igcinwa khona. Lapho uthumela i-imeyili, uhlelo luzoxhuma kulezi Zandiso ukunikela okuqukethwe kwe-imeyili kwekhasimende ngalinye.
Faka okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho ku-imeyili. Kuya ngokuthi kusekelwe ngokwamasegmenti noma okubhaliselwe ngababhalisile kuyadingeka, amabhulokhi wokuqukethwe onamandla noma i-AMPscript asetshenziswa ngokulandelana. Kumabhulokhi wokuqukethwe ashukumisayo, abathengisi bachaza umthetho wokuthi okuqukethwe kukhishwa kanjani (isibonelo, umthetho osuselwa ebulilini). Lokhu akudingi ubuchwepheshe bezobuchwepheshe, ngakho-ke abathengisi bangazenzela bodwa. Okwamanje, ulwazi lwe-AMPscript, ulimi lokubhalwa kokuqukethwe okuphathelene ne-Salesforce Marketing Cloud, luyisidingo sokwenza ngezifiso okuyinkimbinkimbi (ngokwesibonelo, ngokunikezwa komkhiqizo okwenzelwe umamukeli ngamunye).
Yenza ngezifiso ngokuhlakanipha
Ukwenza okuthandwa nguwe sekuyisikhathi eside kwaba i-buzzword embusweni wokuthengisa we-imeyili. Ngenkathi sisekela ngokuphelele inhloso yezinkampani yokwakha ukuxhumana okuphumelela kakhudlwana namakhasimende ngama-imeyili, sisakholelwa endleleni ekhethiwe yokufinyelela ezingeni lokwenza ngezifiso, okuya ngohlobo lwe-imeyili kanye nomgomo. Ngakho-ke, abathengisi abadingi ukwenza wonke umyalezo owodwa futhi banqabe ukuthumela ama-imeyili ngobuningi - ukuhlela nokwenza ama-imeyili enziwe uqobo awufanele umzamo lapho imininingwane efanayo ihloselwe wonke amakhasimende. Ngasikhathi sinye, bawina ukwethenjwa kwamakhasimende nentshisekelo lapho benza okuqukethwe komuntu ngamunye kuma-imeyili anokunikezwa komkhiqizo.
Tags: ampscriptimeyiliimeyili Marketingukwenza ngezifiso i-imeyiliifu lokumakethaweliklasi newesikolo
UDenis uyinhloko yeCRM kanye neCollaboration yeScienceSoft. Uneminyaka engaphezu kwengu-14 yesipiliyoni sobungcweti ku-IT, enza ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lobungcweti, ukwakhiwa kwamasistimu wamabhizinisi nokuphathwa kwephrojekthi kumaCRM, ERP naku-Enterprise Portals.